एक स्थिर आईपी कसरी बनाउने?
आज धेरै मानिसहरू एक भन्दा बढी घर कम्प्युटर छ, र केही, र तिनीहरूले सामान्यतया एक स्थानीय नेटवर्क मा परस्पर छन्। यस मामला मा, तिनीहरूलाई प्रत्येक एक स्थायी आईपी-ठेगाना हुनुपर्छ। यो अनुमति दिन्छ प्रयोगकर्ता खुलेर साझेदारी नेटवर्क विभिन्न कम्प्युटर मा भण्डारण गरिएका फाइलहरू साझेदारी। ऐ-पाई मिसिन बीच फरक हुनेछ यदि नेटवर्क पहुँच गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी आश्चर्य र एक स्थिर आईपी कसरी बनाउने प्रश्नमा सुरु? नेटवर्क को आईपी-ठेगाना परिवर्तन भएको छैन जडान गर्दा, तपाईंले मापदण्डहरू सेट अनिवार्य छ, यो स्थिर बनाउन आवश्यक छ।
इन्टरनेटमा एक स्थिर आईपी कसरी बनाउने?
व्यापार तपाईं मा एक स्थिर आईपी आवश्यक छ भने वान, तपाईं यस्तो अनुरोध गर्न आफ्नो ISP सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो सामान्यतया एक अतिरिक्त लागत मा गरेको छ।
पहिलो विशेष सफ्टवेयर वा केही दर्ता को स्थापना आवश्यक गर्दैन सबैभन्दा आदिम संस्करण, विचार गर्नुपर्छ। चालु अनुप्रयोगहरू र सेवाहरू सबै प्रतीक समूहीकृत जो आफ्नो डेस्कटप, तल कुनामा सही, तपाईंलाई एउटा विशेष सूचक फेला गर्नुपर्छ नेटवर्क जडान को। डबल क्लिक गरेर, तपाईँ यसलाई खोल्न पर्छ। एक विशेष सञ्झ्याल खुला हुनेछ पछि, तपाईं केही फरक विकल्प हेर्नुपर्छ। तपाईं कागज को टुक्रा मा आईपी-ठेगाना सेट लक गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईँले "सामान्य" नाम अर्को ट्याबमा जानुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डो मा "गुण" बटन फेला पार्न, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। इन्टरनेट जडान सेटिङहरू सूची चिनारी हो जो स्ट्रिङ, समावेश गर्नुपर्छ "इन्टरनेट प्रोटोकल (TCP / IP)", यो जहाँ तपाईँले पहिले लिपिबद्ध सजिला ठेगानामा आउन छ। प्रणाली सबै पछि अनुरोध मा तपाईं प्रेस गर्नुपर्छ "ठीक"। इन्टरनेट जडान केहि सेकेन्ड को लागि अवरोध गरिनेछ, र त्यसपछि तुरुन्तै देखा पर्छ। यी आदिम हेरफेर immutable कम्प्युटर IP-ठेगाना हो पछि, कि स्थायी हो।
कसरी गतिशील देखि एक स्थिर आईपी बनाउन: विकल्प
अन्य कुनै पनि कुरा जस्तै, त्यसपछि त्यहाँ धेरै सुविधाजनक र nezatrudnitelen छ अर्को विकल्प छ। तपाईं विशेष सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, यस्तो प्रस्ताव ज्यादातर व्यापार वेबसाइट, साथै एक स्थायी नेटवर्क ठेगाना गर्न आवश्यक छ कि स्रोतहरू केन्द्रित छ। कम्प्युटरमा यसको आईपी-ठेगाना छैन, तर एक विशेष नाम मा यो सेवा उपचारको लागि अनुमति दिन्छ। प्रणाली जस्ता काम गर्दछ: आईपी-ठेगाना मा समर्पित DNS-सर्भर रूपान्तरण नाम प्रयोग गरिनेछ। यो DNS-नाम व्यक्तिगत कम्प्युटर स्थिर रहनुपर्छ, तर यो (पहिले जस्तो) यसको नेटवर्क ठेगाना परिवर्तन जारी हुनेछ। यो कम्प्युटरमा नेटवर्क ठेगाना सधैं monotonous हुनेछ बाहिर जान्छ।
एक स्थिर आईपी बनाउन ताकि गरेको सकेसम्म विस्तृत हेरौं? पहिलो एक विशेष कुनै-आईपी साइटमा जाने छ। त्यसपछि सरल सही हेरफेर को एक सेट पछि लागे। तपाईं एक चिन्ह जहाँ क्लिक गर्न "थप जान्न" कुनै-आईपी मुक्त, फेला पर्छ। तपाईं "अब साइन अप" चयन गर्न आवश्यक जहाँ पृष्ठ प्रकट हुनेछ। अर्को, तपाईं कुनै पनि विशेष क्षेत्रहरू छन् अघि, तपाईं तिनीहरूलाई भर्न छन्। दर्ता पृष्ठ खुल्छ पछि, उनको तपाईं भनिन्छ ग्राहक विन्डोज Dinamic अद्यावधिक अनुप्रयोग एक स्थिर आईपी-ठेगाना कसरी बनाउने को प्रश्नको जवाफ मा सहयोग गर्न सक्षम, डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। "डाउनलोड गर्नुहोस्" तपाईं डाउनलोड गर्न क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो इमेल ठेगाना मा एक लिंक संग इमेल प्राप्त हुनेछ। आफ्नो दर्ता पुष्टि गर्नुहोस्। तथापि, यो तपाईं सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी स्थिर आईपी बनाउन तपाईं, तपाईं बाट आवश्यक सबै छैन बुझे गर्नुपर्छ। अर्को, तपाईंले साइटबाट डाउनलोड एक कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात पछि यो पासवर्ड, र इमेल ठेगाना निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ।
अर्को तपाईं एक निश्चित डोमेन नाम चयन गर्न छ। फेरि, आवश्यकता, आफ्नो खातामा लग इन गर्न जहाँ ट्याब "आफ्नो कुनै-आईपी" चयन साइटमा जाने, त्यहाँ लिंक देखिनेछ को सूची हो। अब "होस्ट / पुन: निर्देशित" चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि "थप्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को पृष्ठमा तपाईं डोमेन नाम चयन गर्न सक्नुहुन्छ। केही क्षेत्रहरू भर्न तपाईं आवश्यक छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, त्यहाँ तपाइँको IP-ठेगाना स्थिर भएको छ भन्ने तथ्यलाई कुनै समस्या छ, तपाईं मात्र एक सानो काम, त्यसपछि तपाईँ नयाँ सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक छ।
चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण: मोबाइल लागि साइट अनुकूल। मोबाइल वेबसाइटमा
"समर्पित सर्भर" - यो के हो?
जानकारी प्रक्रियाहरू के हो? सूचना प्रक्रियाहरू: प्रस्तुति, पाठ
कसरी तपाईंको TV मा आफ्नो फोन जडान गर्न: व्यावहारिक सल्लाह
सूची सीएस को लागत: जानुहोस्। सबैभन्दा महंगा स्टक सीएस: GO
अंग्रेजी Mastiff: विवरण र चरित्र। अंग्रेजी Mastiff फोटो
मशरूम कसरी खाना पकाउनु? एक frying मा Chanterelles आलु साथ सँगै प्यान
Xenia को नाम के हो?
चयापचय प्रक्रिया: अवधारणा, मूल्य। चयापचय - यो के हो?
विषयवस्तुमा "युद्ध" विषय: रचनाका विशेषताहरू
सुन्दर Rottweiler। प्रजाति को विवरण
Iosifa Kobzona रोग: एक भयानक रोग, र यो विरुद्ध सफल संघर्ष को 13 वर्ष
बाँदर लोरी: मर्मतका र हेरविचार घर मा
"तुफान महिला।" श्रृंखला-melodrama को अभिनेता